I-Breb's Cozy Barn, inqolobane endala yamapulangwe kanye nengadi eluhlaza
U-Maria unokuphawula okungu-45 kwezinye izindawo.
I-Breb's Cozy Barn itholakala enhliziyweni yesifunda somlando saseMaramures, enyakatho yeTransylvania. Yingobo endala yamapulangwe ebekwe engadini yangasese emangalisayo, eluhlaza phakathi kwedolobhana elibukekayo laseBreb. Iguqulelwe endaweni enhle, ehlukile yokuhlala, ephilayo futhi egcwele ukukhanya, inika ukuphila okhunini oludala kanye nezinto esezikhohliwe. Ifakwe imibhede enethezekile nawo wonke amathuluzi ekhishi adingekayo idala isimo esithokomele esinama-flavour ezikhathi ezedlule.
Indlu yezivakashi engikwamukela kuyo, ibekwe engadini enhle eluhlaza, kwenye yezindawo zendabuko ezaziwa kakhulu zaseTransylvania ... lapha usengakwazi ukuncoma indlela yokuphila yakudala, abantu besondelene nemvelo futhi ukusebenza umhlaba ngendlela yasendulo es ... Ngazizwa ngimthanda uBreb futhi nganquma ukuhlala lapha ... Ngiyazithanda izindlu zamapulangwe zakudala, ngihlala endaweni eyodwa futhi manje ungathola konke lokhu njengakho konke. Kusukela endleleni le Barn eyayakhiwe ngayo ekuqaleni, manje ihlukaniswe yaba izindawo ezi-2 ezizimele (iminyango ehlukene emi-2, amakhishi ama-2, amagumbi okugeza angu-2 kanye namakamelo okulala ama-2 amakhulu) engaqashwa ngokuhlukana noma indlu yonke uma niyiqembu elikhulu, jabulelani futhi yenzela wena konke! Ngiwabiza ngokuthi amafulethi .... Encane yenziwa lapho kwake kwaba khona isitebele sezilwane ... manje isiphenduke ikamelo elithokomele elinekona lokufunda / lokucula / lokuphumula, ikhishi elihle lapho ungenza khona i-cofee yakho, ulungiselele isidlo sasekuseni. .njalo njalo. Igumbi lokugezela elincane elihle elineshawa, phezulu ezitebhisini yikamelo lokulala elikhulu elinombhede owodwa womshado, umbhede owodwa wezingane ezingashadile futhi uma kudingeka umbhede onesitulo onethezekile wengane yesibili. Ifulethi lesibili likhulu, lalivame ukuba yindawo yenqola yamahhashi, inqolobane enotshani kanye negumbi elincane lapho umndeni wawuhlala khona ... manje sekuyikhishi elibanzi, igumbi lokuphumula elikhanyayo elinokubukwa kwengadi kokubili. emaceleni, izitebhisi ezinkulu ezikhuphukela ekamelweni elivulekile lapho umndeni / iqembu labantu abangu-4-5 lingalala ngokunethezeka ngaphandle kokuminyana. Kunesikhala sombhede wesihlalo owengeziwe noma umbhede wezingane. Ngaphandle engadini unezinketho eziningi lapho ungadla khona / uhlale / uphumule ... ube nesikhathi esimnandi nabangane bakho nomndeni wakho. Izingane zamukelekile kakhulu, zinenkundla yokudlala enhle ezungezile futhi cishe ... izinja eziziphethe kahle ezihamba nomndeni wazo zingajabulela namaholide azo.
Kusuka eBreb's Cozy Barn, ebekwe ngaphandle komgwaqo omkhulu, endaweni ethule yedolobhana ongayenza, ungaqala ukuhlola idolobhana elihle, noma uma ungumuntu othanda imvelo, vele uthathe ilungelo bese ulahleka emasimini otshani omlingo, izimbali zasendle. , ephelezelwa ojekamanzi, izimvemvane, izingoma zezinyoni futhi vele uzivumele uthakathwe yimvelo emangalisayo. Useduze namasonto amaningi enziwe ngokhuni aseMaramureș, asohlwini lwamagugu e-UNESCO kanye neMerry Cemetery evela eSapanta. Ungakwazi ukuphumula ngencwadi nesiphuzo ku-hammocks ngaphansi kwesihlahla esidala se-walnut, noma uthathe uhambo oluya e-Creasta Cocosului ekhangayo futhi ube phezu komhlaba isikhashana. Uhambo lwebhayisikili kuyo yonke indawo luyindlela enhle futhi! Esigodini uzothola izindawo zokudlela ezi-2 ezincane, ezithandekayo ezinevulandi lapho zinikeza khona ukudla okumnandi kwendawo. Ungakwazi ukuxhuma kabusha nokwedlule ngokuvakashela i-The Village Museum kanye neSikhumbuzo Sezisulu ZobuKhomanisi kanye Nokumelana ne-Sighetul Marmatiei.
Ngihlala nendodakazi yami nomndeni wethu wezinja, amakati, amadada kanye neponi, sithanda izilwane, singadli imifino. Ikhaya lethu, indlu yamapulangwe endala iqhele ngamamitha angu-100 ukusuka e-The Barn .... ngakho-ke isikhathi esiningi ngisekhaya futhi ngizungeze. Sathuthela lapha sisuka edolobheni elimatasa ukuze sijabulele ukuphila kwezwe okulula, okuthulile ... imvelo iyindawo yethu ekahle yokuthola ukuthula kwangaphakathi nokulinganisela kodwa futhi sithanda ukuhlangana nabangane bakudala nokwenza abangane abasha. Ngiyajabula ukuxoxa ngesiphuzo, ngikunike amathiphu ambalwa wokuthi yini ongayenza nokuthi ungaya kuphi uma udinga.
Ngihlala nendodakazi yami nomndeni wethu wezinja, amakati, amadada kanye neponi, sithanda izilwane, singadli imifino. Ikhaya lethu, indlu yamapulangwe endala iqhele ngamamitha angu…